SOMALITALK - MAROOKO
Waxaa dhawaan dalka Marooko caasimaddiisa Kasaabalanka lagu soo gebagabeeyey siminaar ku saabsanaa Futsalka iyo Beach Soccer-ka, waxaana soo qabanqaabiyey XIriirka K/cagta Adduunka ee FIFA.
Siminaarkaan waxaa ka qaybgalay qabiirka K/cagta iyo Futsalk Xaaji Yuusuf Max'ed Sheekh iyo Amiin Yuusuf Khasaarooo xubin ka ah Guddiga Xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta waxaana cashiro ka bixinayey khuburo ka socotay xiriirka FIfa, waxaana ka qaybgalay 15 dal oo ka socotay Qaaradda Afrika iyo Wadanka Falastiin.
Siminaarkaan oo socday mudo saddex maalmood ah ayaa ujeedada loo qaybtay waxay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa cayaaraha futsalka iyo Beach Soccer-ka ee Qaaradda Afrika, iyadoo waqtiyadan dambe cayaarahani noqdeen kuwo aad lo xiiseeyo ayna ku shaaca baxeen cayaartooy fara badan oo maanta dunida caan ka ah, waxaana intii uu socday siminaarkaasi la daawanayey cajalo Fiidow ah la xiriira cayaaraha Futsalka iyo Beach-soccoer-ka.
Khubaradii ka socotay Hay'adda FIFA ayaa waxay ka soo qaybgalayaasha u sheegeen in FIFA ay ka go'an tahay sidii ay waxa uga qaban lahaayeen Futsalka iyo Beach-Soccer-ka Afrika, waxaana goob joog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay Xiriirka CAF.
Intii ka qaybgashay siminaarkaasi ayaa waxaa la gudoonsiiyey shahaadooyin calaamad u ah in ay soo qaateen casharo la xiriira cayaaraha Futsalka iyo Beach-Soccer-ka, waxaana bixiyey shahaadadan xiriirka K/cagta ee FIFA, waxayna FIFA sheegtay in la sii kordhin doono siminaarada noocaan oo kale ah.
Cayaarta Futsalka iyo Beach-Soccerka ayaa waayadan dambe si aad ah ugu shaac baxday dunida, waxaana la ogaaday in ay tahay cayaar ay ka soo bixi karaan cayaartooy aad u wanaagsan xagga jirka iyo xagg a maskaxda.
E-Mail: amiin khasaaro@hotmail.com